ओमानविरुद्ध नेपालले टस जितेर बलिङ गर्दै , यो जित कस्को ? - News20 Media
ओमानविरुद्ध नेपालले टस जितेर बलिङ गर्दै , यो जित कस्को ?
February 5, 2020 February 5, 2020 N20LeaveaComment on ओमानविरुद्ध नेपालले टस जितेर बलिङ गर्दै , यो जित कस्को ?
काठमाडौं- आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग–टु अन्तर्गत त्रिदेशीय सिरिजमा ओमानविरुद्ध नेपालले टस जितेर बलिङ गर्ने निर्णय गरेको छ। कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा ओमानले नेपालविरुद्ध केही बेरमा ब्याटिङ थाल्नेछ । आजको खेलमा नेपाली टोलीका खेलाडी अविनास बोहोरा र सुशान भारीले डेब्यू गरेका छन् ।
नेपालले ओमानसँग यसअघि ८ पटक खेलिसकेको छ । जसमा नेपालले सुरुका तीन खेल जितेको छ भने पछिल्ला पाँचवटै खेलमा पराजय बेहोरेको छ । ओमानसँग नेपालको पहिलो भेट सन् २००२ जुलाई १२ मा एसीसी ट्रफीमा भएको थियो । जसमा नेपालले निर्धारित ५० ओभर खेल्दै ९ विकेटको क्षतिमा १५३ रन बनाएको थियो भने १५४ रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमान ३५.३ ओभर खेल्दै सबै विकेट गुमाउँदै ४८ रनमा समेटिएको थियो । जुन खेलमा नेपाल १०५ रनले विजयी भएको थियो ।
ओमनसँगको दोस्रो खेल नेपालले सन् २०१० अप्रिलमा भएको एसीसी ट्रफी एलिटमा खेलेको थियो । त्यसमा पनि नेपालले ओमानमाथि ६ विकेटको शानदार जित हात पारेको थियो । ओमानले दिएको १६९ रनको लक्ष्य नेपालले ४ विकेटको क्षतिमा ३८.३ ओभरमा पूरा गरेको थियो ।
नेपाली टोली: ज्ञानेन्द्र मल्ल (कप्तान), आरिफ शेख, दीपेन्द्र सिंह ऐरी, अभिनास बोहरा, विनोद भण्डारी, करण केसी, ललित नारायण राजवंशी, पारस खड्का, कुशल मल्ल कमलसिंह ऐरी, रोहित कुमार पौडेल, सुशन भारी, शरद भेषावकर र सन्दीप लामिछाने
ओमान टिम : जिसम मसुद (कप्तान), अकिब इल्यास (उपकप्तान), जितेन्दर सिंह, खावर अली, सनुथ अब्राहिम, सुरज कुमार, मोहमद नसीम, सन्दीप गोड, मोहमद नदीम, जय ओडेद्रा, बादल सिंह, अहमेद फयाद बट, खलीमुल्लाह, बिलाल खान
ढुक्क हुनुस् ! यसकारण आज नेपालले ओमानलाई हराउँने छ ( शक्दो शेयर गरौ )
करण केसीले नेपाललाई दिलाए पहिलो सफलता
हजार्डको एक प्रहारले पोर्तुगलको टिम असफल। १-० गोलअन्तरले बेल्जियम क्वार्टरफाइनल प्रवेश।
June 27, 2021 N20
कन्ट्रयाक्ट लिस्टमा नपरेपछी धोनीको क्रिकेट करियर खत्तम ?
January 16, 2020 January 16, 2020 N20
नेपाली बलरहरुको धुलाई गर्दै शतक हान्ने ओमानका खेलाडी दिए नेपाली दर्शकको बारेमा मनछुने प्रतिकृया
February 9, 2020 February 9, 2020 N20